Home Wararka Dowlada Twain oo Somaliland ka caawinaysa arimaha caafimaadka
Dowlada Twain oo Somaliland ka caawinaysa arimaha caafimaadka
Xiriirka ka dhaxeeya Dowlada Twain iyo dalka la magacbaxaay Somalialnd ayaa u muuqda mid maalinca maalinca ka danbeeys sii xoogaysanaya. Twain ayaa ka caawinaysa Somaliland dhinacyo badan sid dhinaca caafimaadka. Wasaaradda arrimaha dibedda ee Taiwan ayaa sheegtay arbacadii sheegtay in ay howlwadeeno caafimaad u soo dirayso Somaliland oo iskeed ugu dhawaaqday madaxbanaani inkastoo aysan wali helin aqoonsi Caalami ah.
Dhanka kale howlada labada dhinac iska kaalmaysanayaan ayaa qayb ka ah heshiiska iskaashiga caafimaadka ah oo u dhexeeya Taiwan iyo Somaliland oo qalinka ku duugay Arbacadii, sida lagu sheegay bayaanka ay soo saareen laba dhinac.
Hawlwadeenada ayaa la dejin doonaa isbitaal ku yaal caasimadda Somaliland ee Hargeysa si loo siiyo tababaro shaqaalaha caafimaadka ee maxalliga ah isla markaana gacan looga geysto hagaajinta awoodda daryeelka caafimaad ee Somaliland, sida lagu sheegay Bayaanka.
“Heshiiska “wuxuu awood u siinayaa saaxiibkeenna geeska Afrika iyo bahwadaagkeenna in ay kor u qaadaan awoodda adeegyada daryeelka caafimaadka ee ay ka faa’iideysanayaan dadka,” ayay qoraalkeeda ku tiri wasaarada arimaha dibada Taiwan.
Iskaashiga caafimaadka wuxuu ahaa qodobada muhiimka ah ee iskaashiga labada dhinac, Wasiirka Arimaha Dibada ee Taiwan Joseph Wu ayaa ka sheegay munaasabaddii saxiixa heshiiska oo ka dhacay Taipei.
Waxa uu xusay in Taiwan ay bilowdey barnaamij wax looga qabanayo yaraynta dhimashada haweenka uurka leh iyo dhallaanka ku dhasha Somaliland ka dib markii labada dhinac ay saxiixeen heshiis iskaashi 2020 si loo horumariyo xiriirka labada dhinac.
Heshiiska, oo la soo saaray bishii Luulyo ee la soo dhaafay, ayaa sidoo kale waxaa ka mid ahaa furitaanka xafiisyo wakiillo ah oo ku yaal labada caasimadood iyo magacaabidda ergooyinka. Xiriirka Somaliland iyo Taiwan waxaa aad u dhibsaday Dowladaha Soomaaliya iyo Shiinaha oo rumaysan in laba maamul yihiin Dowlad-goboleedyo hoostaga Muqdisho iyo Beijing.
Previous articleCulumada Puntland oo ka hortimid Xeerka Gudniinka Haweenka
Next articleMagalaada Hargeysa oo Duq cusub yeelatay
(Xog) RW Roble & Fahad Yasin oo isku qabtay warqad uu...
Ururka Daacish oo sheegtay in ay dileen guddoomiye degaan ee ka...